The Alcazar nke Toledo | Akụkọ Njem
Foto | Wikipedia Carlos Delgado
Toledo (Castilla-La Mancha, Spain) mara maka ọmarịcha ihe nketa-akụkọ ihe mere eme ya, maka n'okporo ámá ndị ochie na maka ịbụ otu n'ime obodo ndị nwere akụkọ ihe mere eme kachasị eme ka ọdịbendị dịgasị iche gwakọtara kemgbe narị afọ mbụ AD.
Ihe ngosi ya bụ nnukwu Alcázar nke Toledo nke e wuru n'oké nkume dị n'akụkụ kasị elu nke obodo ahụ. Buildinglọ nke lanarịrị agha, ọdachi na oge na-enweghị mgbagha mana ọ ka na-apụghị ịkọwapụta ma nwee nnukwu ihe dị na Toledo taa.
Ka ọ dị ugbu a, Alcázar bụ isi ụlọ ọrụ nke Museum Museum na Ọbá Akwụkwọ Mpaghara nke Castilla-La Mancha. Ọ bụrụ n ’ezumike gị ọzọ ịchọrọ ịmata obodo a na-akpọ nke ọdịnala atọ ahụ na ọmarịcha Alcázar de Toledo, na post a anyị ga-agwa gị ihe niile gbasara mmalite na akụkọ ntolite ya.
1 Aha ebe e wusiri ike
2 Akụkọ banyere Alcazar nke Toledo
3 Ihe ngosi agha
4 Ọbá akwụkwọ mpaghara
5 Nhazi na ọnụego nke Alcázar nke Toledo
5.2 Ọnụ ego
Aha ebe e wusiri ike
Aha ya sitere na Arabic "Al-Qasar" nke putara ebe ewusiri ike. N’okpuru ọchịchị Alakụba (malite n’afọ 711 AD ruo mgbe ntọhapụ n’aka Eze Alfonso nke Isii nke Castile n’afọ 1085) natara aha a wee bụrụ onye a maara dị ka Alcazar.
Akụkọ banyere Alcazar nke Toledo
N'ịbụ nke dị na mpaghara dị mkpa, mmalite ya dị n'oge Rom na n'oge mmeri Visigothic, Leovigildo guzobere isi obodo ya ebe a wee mee mgbanwe maka ụlọ ahụ nke mbụ weere dị ka nnukwu ebe ewusiri ike.
Ugbua na Middle Ages, n'oge ọchịchị nke Alfonso nke Isii na Alfonso X El Sabio, e wughachiri ya na-ebute nke mbụ square-plan ebe e wusiri ike na isi facade nke ahụ atọ na ụlọ elu na akụkụ ma Ọ bụ na narị afọ nke XNUMX mgbe Emperor Carlos V na nwa ya nwoke Felipe II nyere iwu ka e wuo Alcázar nke Toledo dị ka ndị dị otú ahụ.
Na narị afọ nke XNUMX, n'oge Agha nke Ọchịchị Spen, ọ tara ahụhụ ọkụ nke bibiri ya n'ihi esemokwu n'etiti ndị na-akwado ndị Habsburgs na ndị Bourbons. E weghachiri ya ọzọ ka o merisịrị ụlọ Bourbon mana, afọ ole na ole ka nke ahụ gasịrị, n'oge Agha Spanish nke Nnwere Onwe, ndị France gbara ya ọkụ. Mgbe agha ahụ busoro Napoléon agha, a gbanwere Alcázar nke Toledo ma malite iji ya dị ka ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ndị agha.
Foto | Nzukọ Mgbakọ
Ebe a e wusiri ike bụ ebe a na-alụ agha mgbe a na-alụ Agha Obodo ndị agha Republicans nọchibidoro Colonel Moscardó nke ndị agha obodo, ndị na-akwado ya na ndị ikwu ha (gụnyere ndị agadi, ụmụ nwanyị na ụmụaka) n'ime ya ogologo oge. Mwakpo ndị Republican bibiri ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ usoro ya niile mana Moscardó jisiri ike iguzogide na-enweghị mmeri ruo mgbe General Franco bịara nnapụta ya. Mgbe agha ahụ gachara, na 1961, Francisco Franco wughachiri ihu ya na ụzọ yiri nke mbụ.
Ka ọ dị ugbu a, emezigharị Alcázar nke Toledo ka ọ bụrụ Ebe Ndebe Ihe Ndị Agha. N'oge ọrụ ahụ, a na - achọta ndị Roman (olulu mmiri), Visigoth na ashlar Muslim na site n'oge usoro ndị eze Trash (nke Juana La Loca duziri), nke nyere data na-adọrọ mmasị banyere akụkọ ihe mere eme na ndị bi n'obodo a mara mma. Dịka ọmụmaatụ, a na-ahụ olulu mmiri ndị Rom, ọdọ mmiri Visigothic, mgbidi Arab na ogige a kpọgidere na narị afọ nke XNUMX.
Ihe ngosi agha
Muselọ ihe ngosi nka ndị agha dị na ụlọ abụọ: akụkọ ihe mere eme Alcázar na nke ọhụrụ. Nke mbụ abụrụla ihe ngosi na-adịgide adịgide. E kewara ya n'ime ime ụlọ iri na atọ ebe egosiputara nnakọta dị iche iche na ime ụlọ asatọ ebe ewepụtara usoro njem oge site na akụkọ agha ndị Spain.
Lọ ọhụrụ ahụ, n'aka nke ọzọ, nwere ụlọ ihe ngosi nwa oge, ụlọ ndị agha ugbu a, ngalaba nchịkwa, ebe nchekwa akwụkwọ, ọbá akwụkwọ, klaasị klaasị, ụlọ mgbakọ, ebe obibi mweghachi na ụlọ nkwakọba ihe ndị nwere usoro kachasị mma maka nchekwa na mweghachi nke ego ha tinyere.
Ọbá akwụkwọ mpaghara
Alczar nke Toledo na-echezi Ọbá Akwụkwọ Mpaghara nke Castilla-La Mancha ugbu a, nke ihe mejupụtara ya karịrị mpịakọta 380.000. na nchịkọta ya nke uru pụrụ iche (dị ka Borbón Lorenzana) na mgbakwunye na ọnọdụ ya dị ka oghere ọdịnala na-ekele maka ụlọ ọrụ ya dị ebube.
Foto | Castilla La Mancha akwụkwọ akụkọ
Nhazi na ọnụego nke Alcázar nke Toledo
Ọ na-emepe site na elekere iri nke ụtụtụ ruo elekere 10 nke ụtụtụ n'afọ niile ma e wezụga Jenụwarị 17 na 1, May 6, Disemba 1, 24 na 25. Ka ọnwa nke Eprel dị na 31, ụlọ ihe ngosi nka ga-emechi na Mọnde (ezumike gụnyere).
Ahịa tiketi ruo 30 nkeji oge tupu ụlọ ngosi ihe nka emechie na mwepụ ga-ewere nkeji 15 tupu emechi.
Nkwenye mmadụ niile, euro 5 (n'okpuru 18 afọ, n'efu)
Tiketi + Audio ndu, 8 euro
Mbelata tiketi + Ntụziaka ọdịyo, euro 5,50
Ibelata tiketi, euro 2,5
Nbanye n'efu: Sọnde ọ bụla, Machị 29, Eprel 18, Ọktọba 12 na Disemba 6.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Toledo » Alcazar nke Toledo